ဓမ္မရသ: March 2008
“ပါရမီနဂို၊ မရှိလိုက ကုသိုလ်ဒုစရိုက်၊ မဟောထိုက်တည်...
ဓမ္မသာဝန (တရားနာရသော) အကျိုး(၅)ပါး
သောတာပန်ပုဂ္ဂိုလ် တို့၌ မထိုက်သော တရားခြောက်မျိုးအာ...
ကာလဒါန ( ၅ ) ပါး
ဒါန (၈) မျိုး
စကားပြောခြင်းနှင့် ပတ်သက်ပြီး မြတ်ဗုဒ္ဓက အင်္ဂုတ္ထိုရ်...
သရဏဂုံတည်ခြင်းအကျိုးနှင့် ပတ်သက်၍ အပါဒါန်ပါဠိတော် ...
လူကောင်းသည် အရူးနှင့်ပြိုင်၍ အ၀တ်မလစ်ကောင်း။ ...
ငါတွေ့လို မြင်လိုသော အရာ
ပညာရှိတို့ စွန့်ပယ်အပ်သူ (၁၁) ဦး
ဗုဒ္ဓ၏ အဆုံးအမနှင့်အညီ နေထိုင်ခြင်း
ပညာရှိတို့၏ အကျင့် (၃)ပါး
စကားများများပြောခြင်း၏ အပြစ် ငါးပါး
ကုသိုလ် (၁၀) ပါး
အဆင်းသာရှိ၍ ရနံ့မရှိသော၊ တင့်တယ်လှပသော( ပေါက်ပွင်...
ပြည့်စုံသော သီလရှိကုန်သော မမေ့မလျော့ နေလေ့ရှိကုန်ေ...
အပြစ်ဖော်ပြ နှိမ့်ချဆုံးမလေ့ရှိသော ပညာရှိအား မြ...
ရုပ်နာမ်နှစ်ပါး၊ ရှုပွားဘို့ရာ၊ ဘာများဝန်လေး၊ သင်ငေ...
ကုသိုလ်မယူ၊ အသက်ရှူ ၊ ထိုသူသေ၍ နေတော့သည်။ အကုသိုလ်...
မလုပ်မပြော၊ လုပ်မှပြော၊ သဘောစင်လှစေ။ အပြောသာချဲ့...
မကောင်းမှုအကုသိုလ်ကံကို ပြုကြကုန်သည့် ပညာမဲ့ကုန်သော...
ဗုဒ္ဓမြတ်စွာ လောင်းလျာတုန်းက၊ နောက်ဆုံးအထိ ပါရမီ လ...
တစ်နေ့တစ်လံ ပုဂံဘယ်မရွေ့ပေမယ့်... ပုဂံကိုကျောခိုင်...
စစ်ကိုင်းတံတား အလျှောက်မခက် အဆောက်ခက်။ လယ်လုပ်မခက်...
သူတော်မဟုတ် သူယုတ်တို့အား အကြိမ်တစ်ရာ ပေါင်းသော်လ...
ခန္ဓာ၏ အဖြစ်-အပျက် ကို မမြင်ဘဲ အနှစ်တစ်ရာ ရှည်နေရတာ...
ဆိုပိန့်မညှာ၊ စေ့စေ့နာလော့၊ ဂင်္ဂါသဲမျှ၊ ပွင့်ကုန်ကြ...
သိချင်ယောင်ဆောင်သော မသိမိုက်သည် မသိချင်ေ...
သီလရနံ့ မွှေးပျံ့ကြိုင်စွာ၊ သီလဆင်တိုင်း ရှုတိုင်...
ဓမ္မော ဟဝေ ရက္ခတ ဓမ္မစာရီ - တရားကို စောင့်ရှောက်သူကိ...
လူတိုင်း၌ မွေးကတည်းက ပါလာသော “ဓားမကြီး”တစ်လက် ရှိ...
မိမိ၏စိတ်ကို သမာဓိ(တည်ကြည်အေးချမ်းမှု) ဖြစ်စေရန်...
ကိုးကွယ်ရာမှားခြင်းသည် အမှားတကာတို့တွင် အမှားဆုံး...
လိုချင်လျှင် ဆင်းရဲသည်။ မလိုချင်လျှင် ချမ်းသာသည်။...
တစ်စတစ်စ၊ စွန့်ဝံ့မှလျှင်... ဘ၀နောက်နှောင်း၊ ဆက်...
မြတ်ဗုဒ္ဓက ဂါမဏိအား ဤသို့ ဟောကြားတော်မူခဲ့လေ၏-
လောကဒဏ်ရာ၊ ကိုယ့်သာနာ၊ စိတ်မှာ မနာနှင့်။ ...
ရေးသားသူ အောင်ဦး ရေးသားချိန် 31.3.080ရေးသားခဲ့ရန်
အဂုတ္တိုရ်ပါဠိတော်၊ ပဉ္စကနိပါတ်၊ သဒ္ဓမ္မ၀ဂ်၊ ပဌမသဒ္ဓမ္မသမ္မောသသုတ်တော် တွင် ဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားရှင်သည် သာသနာကွယ်စေနိုင်သော တရားကြီးများကို ဟောကြား တော်မူခဲ့ပါသည်။
မြတ်စွာဘုရားရှင်၏တရားဒေသနာတော်များကိုနာယူခြင်းမရှိခြင်းသည် သာသနာကွယ်စေခြင်းအကြောင်း အစပဋ္ဌမပင် ဖြစ်ပါသည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် တရားမနာယူသည့်အတွက် .....
ခ) ကြားဘူးသောအကြောင်းအရာများကို ထပ်၍ရှင်းလင်းစွာ နားလည်နိုင်ရန် လည်းမဖြစ်နိုင်တော့ပါ။
ဂ) ယုံးမှားသံသယဖြစ်နေသော အချက်များ၌ ယုံးမှားကင်းရခြင်းမရှိသည့်ပြင် ပို၍ပင်တိုးလာနိုင်ပါသည်။
င) သဒ္ဓါပညာမရှိတော့၍ စိတ်ကြည်လင်နိုင်ခြင်းမရရှိတော့ပါ။
ကာလေနဓမ္မသာဝနမင်္ဂလာ ဟုဆိုသည့် အခါအားလျော်စွာ တရားနာခြင်း မရှိသောသူများသည် သာသနာတော်ကိုဖျက်ဆီးနေခြင်းမဟုတ်သော်လည်း ပျက်စီးစေနိုင်ပါသည်။ အကြောင်းမှာ အယူမမှန်သော သံသယများစွာထုံလွမ်း နေသောသူများက သယ်ဆောင်လာမည့်သာသနာအတွက် မတွေးဝံ့စရာပင်။ ထို့ကြောင့် နေ့စဉ်တရားနာခြင်းအမူအားပြုလုပ်ခြင်းဖြင့် သာသနာတော်အား စောင့်ရှောက် သူများဖြစ်နိုင်ကြ ပါစေ။
မြတ်စွာဘုရားရှင်၏ပိဋကတ်စာပေများကိုသင်ကြားမူမရှိခြင်းသည်လည်း သာသနာတော်ကိုပျက်စီးစေ နိုင်ပါ သည်။ တရားစာပေများကိုသင်ယူ ကျက်မှတ်ထားခြင်းမရှိပါကအမှား အမှန်ခွဲခြားသိမြင်နိုင်မည်မဟုတ်ပေ၊၊ နောက်ဆုံးတော့ အသိမှားတော့၊ အမှတ်မှားတယ်၊အမှတ်မှားတော့ အယူမှားပြီး တခြားဘာသာဝင်ဖြစ် သွားတက်ပါသည်။ ထို့ကြောင့် တရာစာပေများ လေ့လာသင်ယူပြီး သာသနာတော်ကို စောင့်ရှောက် နိုင်ကြပါ စေ။
သင်အံကျက်မှတ်ထားသော စာပေများကို နှုတ်တတ်အာဂုံဆောင်ထားခြင်း မရှိပါကလည်း အလွဲလွဲအမှားမှားဖြစ်ခြင်းကြောင့်လည်းသာသနာတော်ပျက်စီးစေ နိုင်ပါသည်။ အာဂုံဆောင်မှ အာဂလူဖြစ် ရိုးထုံးစံရှိပါသည်။ ထို့ကြောင့် ဗုဒ္ဓတရားတော်များကို ကျက်မှတ်ပြီး နှုတ်တွင်ဆောင်၍သာသနာတော်ကို စောင့် ရှောက်နိုင်ကြပါစေ။
တစ်ခုပင်ဖြစ်သည်။ မိမိသိပြီးသားတရားတော်များကို မိမိ သိရုံသာ မဟုတ်ဘဲ နှောင်းလူငယ်တို့လေ့လာ ဆည်းပူးနိုင်အောင်မှတ်သား၊ ဖြန့်ဝေ သင့်ပေသည်။ သို့မှသာသနာတော် သည်နှစ်ပေါင်းရှည်ကြာစွာ တည်တံ့ နိုင်ပေလိမ့်မည်။
ဆောင်ထားအပ်သောတရားသဘောတို့၏ အနက်အဓိပ္ပါယ်ကို ရိုသေစွာ ဥာဏ်ဖြင့်မစူးစမ်းမဆင်ခြင်ကုန်။ အနက်သဘောကိုသိ၍၊ တရားသဘောကိုသိ၍ (လောကုတ္တရာ) တရား အားလျော်သော အကျင့်ကို ရိုသေစွာမကျင့်ကုန်။ ထိုသို့သော မပြုသင့်မပြုကျင့်အပ်သည်များကို ကျင့်နေခြင်းဖြင့်သာသနာကွယ် စေနိုင်ပါသည်ဟု မြတ်စွာဘုရားရှင်သည် အဂုတ္တိုရ်ပါဠိတော်၊ သဒ္ဓမ္မ၀ဂ်၌ အ ထင်အရှားမိန့်မှာတော်မူခဲ့ပါသည်။
စာဖက်သူများအနေနဲ့လည်း မိမိသိရှိပြီးသော တရားတော်များကို လိုက်ကျင့်ကြပါ။
အသိကို လိုက်မကျင့်တော့ သိသလို မသိသလိုနဲ့ နောက်ဆုံးတော့ မသိတာဘဲ ဖြစ်သွား
တက်သည်ကို သတိ သံဝေဂ ရကြပါကုန်။ ။
ရေးသားသူ အောင်ဦး ရေးသားချိန် 29.3.080ရေးသားခဲ့ရန်
၁။ ဒေါသထွက်တဲ့ သူကို မေတ္တာပွား၊
၂။ နှုတ်ကြမ်းတဲ့ သူကို ယဉ်ကျေးစွာပြော၊
၃။ နှမြောတဲ့ သူကို နာနာပေး၊
၄။ လိမ်တက်တဲ့ သူကို မှန်မှန်ကန်ကန်ဆက်ဆံ၊
( “ဥတ္တရာဝတ္ထု” တရားတော်မှ… )
ရေးသားသူ အောင်ဦး ရေးသားချိန် 27.3.080ရေးသားခဲ့ရန်
၁။ အိုတက်တက်တဲ့ သဘောတရားကို မအိုပါနဲ့လို့် တောင့်တ၍မရပါဘူး။
၂။ နာတက်တက်တဲ့ သဘောတရားကို မနာပါနဲ့လို့ တောင့်တ၍မရပါဘူး။
၃။ သေတက်တက်တဲ့ သဘောတရားကို မသေပါနဲ့လို့ တောင့်တ၍မရပါဘူး။
၄။ ပျက်စီးတက်တက်တဲ့သဘောတရားကို မပျက်စီးပါနဲ့လို့ တောင့်တ၍မရပါဘူး။
၅။ ကုန်ဆုံးတက်တက်တဲ့သဘောတရားကို မကုန်ဆုံးပါနဲ့လို့် တောင့်တ၍မရပါဘူး။
အရှင်ကောဝိဒ ( " စိတ်ဆိုတဲ့ စိတ် " တရားတော်မှ… )
ရေးသားသူ အောင်ဦး ရေးသားချိန် 26.3.080ရေးသားခဲ့ရန်
အားမှလုပ်မယ်၊ အားမှလုပ်မယ်ဆိုပြီး အားရက်စောင့်မယ်ဆိုရင် ခေါင်း(အလောင်းပုံး) ထဲဝင် မယ့်နေ့ပဲ။ ဒီလိုဖြစ်မယ်ဆိုရင် အားရက်ကိုမစောင့်နဲ့တော့။ ဒီကနေ့သည်ကိုယ့် အတွက် နောက်နေ့သည် ကိုယ့်အတွက်မဟုတ်ဘူးလေ။ အနာဂတ်ဆိုတာမသေ ချာဘူးတဲ့။ မတော် ကွေးသောလက်မဆန်ခင်၊ ဆန့်သောလက်မကွေးခင် ဆိုသလို ညသေသွားဘယ့်နှယ်လုပ်မလဲ။ ကိုယ်ကျိုးမနည်းဘူးလား။
ရေးသားသူ အောင်ဦး ရေးသားချိန် 25.3.080ရေးသားခဲ့ရန်
သောတာပန်ပုဂ္ဂိုလ် တို့၌ မထိုက်သော တရားခြောက်မျိုးအား အင်္ဂုတ္တိုရ်ပါဠိတော် မြန်မာပြန် သီတ၀ဂ် ပဌမ အဘ္ဘဗ္ဗဋ္ဌာန သုတ်၌ ဤသို့ပြဆိုတော်မူခဲ့ပါသည် ။
၅။မကပ်ရောက်အပ်သည့်အကြောင်းတရား( ကံငါးပါး ၊ ဒိဋ္ဌိ ၆၂ ပါး ) ကိုတဖန်ကပ်ရောက်ခြင်း၌လည်းကောင်း၊
၆။ ရှစ်ကြိမ်မြောက် ( ကာမသုဂတိ ) ဘ၀ကို ဖြစ်စေခြင်း၌ လည်းကောင်း ....... မထိုက်။
ဟူ၍ ဗုဒ္ဓမြတ်စွာမိန့်တော်မူခဲ့ပါသည် ။
၁။ ဘုရား ၊ တရား ၊ သံဃာ အပေါ်၌ သဒ္ဓါတရားပြည့်ဝစွာလှူခြင်း၊
“သဒ္ဓါကြည်ညို၊ ရိုသေလှစွာ၊ အခါကိုသိ၊ မစွန်းငြိပဲ၊ မထိမပ ဤငါးဝ၊မှတ်သား သပ္ပူရိသ မြတ်ဒါန”
ရေးသားသူ အောင်ဦး ရေးသားချိန် 24.3.080ရေးသားခဲ့ရန်
၁။ အာဂန္တုက ဒါန ... ဧည့်သည်ဖြစ်သော ရဟန်းကိုလှူခြင်း၊
၂။ ဂမိက ဒါန ... ခရီးသွားဖြစ်သော ရဟန်းကိုလှူခြင်း၊
၃။ ဂိလာန ဒါန ... နာဖျားသော ရဟန်းကိုလှူခြင်း၊
၄။ ဒုဗ္ဘိက္ခဒါန ... ငတ်မွတ်ရှားပါးသော ကာလ၌ လှူဒါန်းခြင်း၊
၅။ န၀သဿ န၀ဖလ ဒါန ... ကောက်ဦး ၊ သစ်သီးဦးတို့ကို လှူဒါန်းခြင်း။
၁။ အာသဇ္ဇဒါန - ရောက်ဆဲခဏ၌ ပေးလှူခြင်း၊
၂။ ဘယဒါန - သူတစ်ပါးတို့ ကဲ့ရဲ့ခြင်းဘေး ၊ အပါယ်ဘေးတို့ကို ကြောက်ရွံ့၍လှူခြင်း၊
၃။ အတီတာပေက္ခဒါန - ငါ့အား ပစ္စည်းဝတ္ထုကို ပေးဘူးသောသူဟု နှလုံးသွင်း၍ ပေးလှူခြင်း၊
၄။ အနာဂတာပေက္ခဒါန - ဤပုဂ္ဂိုလ်အား ယခုလှူလျှင် နောင်ငါ့အား တစ်စုံတစ်ခုသော ၀တ္ထုကို ပေးလတ္တံ့........ ဟုနှလုံးသွင်း၍ပေးလှူခြင်း၊
၅။ သာဟုဒါန - ဒါနဟူသည် ပညာရှိတို့ ချီးမွမ်းအပ်သောကြောင့် ကောင်း၏ဟု နှလုံးသွင်း၍ ပေးလှူခြင်း၊
၆။ နာရဟဒါန - စားနိုင်သောသူသည် ၊ မစားနိုင်သောသူ ( မစားရသူ ) အားမပေးပဲ မနေထိုက်ဟု ပေးလှူခြင်း ၊
၇။ အဗ္ဘုဂ္ဂစ္ဆဒါန - ဤအလှူကိုပေးလှူသည်ရှိသော် ကောင်းသောကျော်စောသံသည် လွှမ်းမိုး၍ တက်လတ္တံ့ .. ဟုနှလုံးသွင်း၍ပေးလှူခြင်း၊
၈။ စိတ္တာလင်္ကာရဒါန - ၀ိပဿနာ စိတ်၏တန်ဆာ အခြံအရံ အကျိုးငှာ ပေးလှူခြင်း။
စကားပြောခြင်းနှင့် ပတ်သက်ပြီး မြတ်ဗုဒ္ဓက အင်္ဂုတ္ထိုရ် ပါဠိတော်၌ ဤသို့ဟောကြားခဲ့ပါသည်။
(က) ကာလ= ပြောသင့်သောအခါမှ ပြောရ၏၊ အချိန်မတန်လျှင် မပြောဆိုရာ။
(ခ) သစ္စာ= အမှန်ကိုသာ ပြောဆိုရာ၏။
(ဂ) သဏု= နူးညံ့ချိုသာစွာ ပြောဆိုရာ၏၊ ခက်ထန်ရင့်သီးစွာ မပြောဆိုရာ။
(ဃ) အတ္တသံဟိတ= အကျိုးစီးပွားဖြစ်မည့်စကားကိုသာ ပြောဆိုရာ၏။
(င) မေတ္တာစိတ္တ= မေတ္တာရှေ့ထား ပြောဆိုရာ၏၊ ဒေါသမောင်းတင်း၍ မပြောဆိုရာ။
ရေးသားသူ အောင်ဦး ရေးသားချိန် 21.3.080ရေးသားခဲ့ရန်
၁)အိပ်ယာမှခဏခဏနိုးနေသူအတွက် ည သည်ရှည်လျားလှစွာ၏။
၂)ခရီးပန်းလာသောသူတို့အတွက် ခရီး သည်ရှည်လျားလှစွာ၏။
၃)သူတော်ကောင်းတရားကို မသိကြသောသူတို့ အတွက် သံသရာခရီး သည်ရှည်လျားလှစွာ၏။
ယုံကြည်ခြင်း ( belief ) ဆိုရာတွင် ရတနာသုံးပါးအပေါ်တွင် လည်းကောင်း၊ ကံ၊ ကံ၏ အကျိုးကို လည်းကောင်း ယုံကြည်သော တရားကို သဒ္ဓါတရား ယုံကြည်ခြင်း ( belief ) ဟုဆိုပါသည်။ ထိုမှတပါးသော ယုံကြည်မှု နတ်၊ ၀ိဇ္ဇာ၊ ဇော်ဂျီ စသောာ ကိုးကွယ်ရာ အစစ်မဟုတ်သောအရာများအပေါ်၌ ယုံကြည်မှု သဒ္ဓါတရားဖြင့် ကိုးကွယ် လျှင်သရဏဂုံပျက်စီးပါသည်။ သေဆုံးသောအခါတွင်လည်း သရဏဂုံပျက်စီးသည်။ သို့သော်ကြောက်ရွံ့ခြင်း ကြောင့်လည်းကောင်း၊ မိမိအလိုလောဘကြောင့်လည်းကောင်း ဆည်းကပ်လျှင် သရဏဂုံ ညှိုးနွမ်းပါသည်။ သရ ဏဂုံမတည်သူသည်ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်မဖြစ်ထိုက်ပေ။ သရဏဂုံတည်ပါ၏ ဟုလည်းဆိုသေး၊ တစ်ခြားသောကိုး ကွယ်ရာအစစ်မဟုတ်သည်များကိုလည်း ဆည်းကပ်ပါသည်ဆိုသူသည်မိမိကာမပိုင်ရှိပါလျှက် နောက် တစ် ယောက်ကို မျက်စောင်းထိုးသူပမာ ရွံရှာဖွယ်အတိဖြစ်ပါ၏။
အင်္ဂုတ္တိုရ်အဋ္ဌကထာတွင်အပါယ်မလားလောက်အောင် ကုသိုလ် အားကြီးမားလှသဖြင့် သောတာပန် နှင့်တူ သည်ဟူ၍ပင် ဖွင့်ဆိုထားသောကုသိုလ် ၆ မျိုးရှိပါသည်။ ၄င်းတို့မှာ_
ထိုကုသိုလ်ခြောက်မျိုးတွင် သရဏဂုံ ကုသိုလ်က ထိပ်ဆုံးသို့ရောက်နေခြင်းမှာ ကုသိုလ်စွမ်းအား အကြီးဆုံးဖြစ် သောကြောင့်ပင် ဖြစ်ပါသည်။
ရေးသားသူ အောင်ဦး ရေးသားချိန် 20.3.080ရေးသားခဲ့ရန်
သရဏဂုံတည်ခြင်းအကျိုးနှင့် ပတ်သက်၍ အပါဒါန်ပါဠိတော် မြန်မာပြန်၌ ရရှိသောအကျိုးရှစ်ပါးကိုဤသို့မှတ်သားခဲ့ရပါသည်။
(၈) ဂုဏ်သတင်းတက် .....
ရေးသားသူ အောင်ဦး ရေးသားချိန် 19.3.080ရေးသားခဲ့ရန်
၁)အတ္တသန္နိယျာတန သရဏဂုံ= ယနေ့မှအစပြု၍ မိမိကိုယ်အား ရတနာသုံးပါး၌ဆောင်နှင်း၍ကိုယ်ကိုစွန့်ခြင်း။
၂)တပ္ပရာယဏ သရဏဂုံ= ယနေ့မှအစပြု၍ မိမိကိုယ်အား ရတနာသုံးပါး၌ လည်းလျောင်းခြင်း။
၃)သိဿဘာဝူပဂမန သရဏဂုံ= ယနေ့မှအစပြု၍မိမိကိုယ်အားရတနာသုံးပါ၌သာ တပည့်အဖြစ်ဖြင့်ဆည်း ကပ်ခြင်း။
၄)ပါဏိပါတ သရဏဂုံ= ယနေ့မှအစပြု၍ မိမိကိုယ်အား ရတနာသုံးပါးတို့၌ရိုသေမြတ်နိုးစွာ အသက်စွန့်၍ ကိုးကွယ်ဆည်းကပ်လဲလျောင်ခြင်း။
၄) မြတ်သောအလှူကို ခံတော်မူထိုက်သောအားဖြင့် ရှိခိုးကိုးကွယ်ခြင်း၊( သရဏဂုံမြောက်၏)။
ရေးသားသူ အောင်ဦး ရေးသားချိန် 18.3.080ရေးသားခဲ့ရန်
လူကောင်းသည် အရူးနှင့်ပြိုင်၍ အ၀တ်မလစ်ကောင်း။
A good man should not remain naked asamad man does .
သူတော်ကောင်းသည် မသူတော်နှင့်ပြိုင်၍ ဒေါသမဖြစ်ကောင်း။
A gentleman should not show anger asamad man does .
ကျင်ကြီးသည် နွေးသည်ဖြစ်စေ ၊ အေးသည်ဖြစ်စေ ရွံရှာဖွယ်သာတည်း။
Stool is loath some whether it is hot or cool .
၁) ရတနာသုံးပါးတို့၏ အရိပ်သည် ....
၂) ရတနာသုံးပါးအား ........
၃) ကုသိုလ်ကမ္မပထတရားများ .......
၄) မိမိတို့စေတနာအလိုက်ထိုက်သင့်သော အကျိုးထူးတရားများ မျက်မှောက်ခေတ်၌ပင် ချက်ချင်းလက်ငင်းခံစားနိုင် ကြပါစေ ။
(က) ဤသို့ ကုသိုလ်ကမ္မပထတရားများ ကြိုးစားမြဲကြိုစားနေကြသလို လောကီ လောကုတ္တရာနှစ်ဖြာသော အကျိုးတရားလည်း တိုးပွားမြဲတိုးပွားကြပါစေ။
(ခ) ဤသို့လောကီ လောကုတ္တရာတရားများ တိုးပွားမြဲတိုးပွားနေကြသလို ကုသိုလ်ကမ္မပထတရားများကိုလည်း ကြိုးစားမြဲကြိုးစားနိုင်ကြပါစေ။
(ဂ) ငါဖြည့်ကျင့်ခဲ့သော ပါရမီကုသိုလ်ကံ၏ တန်ခိုးတေဇော်မေတ္တာတော်အာနုဘော်ကြောင့်
(မဟာဗောဓိမြိုင်ဆရာတော်ကြီး၏ ဓမ္မနီတိကထာမှ... )
ရေးသားသူ အောင်ဦး ရေးသားချိန် 17.3.080ရေးသားခဲ့ရန်
၁ ။ ကောဓံ - အမျက်ဒေါသကြီးသူ ။
၂ ။ လောဘံ - အလိုကြီးသူ ။
၃ ။ မဒံ - မာန်ယစ်လွန်းသူ ။
၄ ။ မာနံ - ထောင်လွှားသူ ။
၅ ။ တိန္နံ - ပျင်းရိသူ ။
၆ ။ ဣဿံ - ငြူစူစောင်းမြောင်းသူ ။
၇ ။ ပမာဒံ - ကုသိုလ်ကောင်းမှု၌ မေ့လျော့သူ ။
၈ ။ သောဏ္ဏံ - သေအရက်သောက်ကြူးသူ ။
၉ ။ နိဒ္ဒါလုကံ - အအိပ်ကြူးသူ ။
၁၀။ မက္ခံ - ကျေးဇူးချေတက်သူ (ကန်းသူ) ။
၁၁။ မစ္ဆေရဉ္စ - ၀န်တိုသူ ။
ရေးသားသူ အောင်ဦး ရေးသားချိန် 16.3.080ရေးသားခဲ့ရန်
သမုဒ္ဒရာရေလှိုင်းတွေ ပုတ်ခတ်လိုက်တိုင်း ရတနာတွေဟာ သမုဒ္ဒရာ၏ အနက်ရှိုင်းဆုံးနေရာသို့ ရောက်ရသလို စိတ်ဓာတ်ရင့်ကျက်သော သူတော်ကောင်း တို့သည်လည်း လောကဓံတို့နှင့်ကြုံရလေလေ သာသနာ၏
ရေးသားသူ အောင်ဦး ရေးသားချိန် 15.3.080ရေးသားခဲ့ရန်
၁ ။ အမျက်ဒေါသကို စွန့်ပယ်ခြင်း ။
၂ ။ မာနကို စွန့်ပယ်ခြင်း ။
၃ ။ သံယောဇဉ် အားလုံးကို ကျော်လွန်ခြင်း ။
၄ ။ နာမ်ရုပ်၌ တွယ်တာကပ်ငြိမှု မရှိခြင်း ။
၅ ။ ကြောင့်ကြမှု မရှိခြင်း ။
၁ ။ မည်သူ့အပေါ်တွင် မဆို အရင်းအဖျား မခွဲခြားဘဲ စိတ်ကောင်း နှလုံးကောင်း ထားပါ။
၂ ။ ကောင်းသော ဣဌာရုံနှင့် တွေ့သောအခါ လွန်စွာဝမ်းသာအားရ သောမနဿ လောဘ
၃ ။ မကောင်းသော အနိဌာရုံနှင့် တွေ့သောအခါ၌လည်း ၀မ်းနည်းပက်လက် မနှစ်သက်သော
ဒေါမနဿ ဒေါသ မဖြစ်ပါနှင့်။
၄ ။ မိမိပိုင် မဟုတ်သော ပစ္စည်းဥစ္စာများကို မတရား ပိုင်ဆိုင်လို့သည့် မတရားရယူလိုသည့်
လောဘ မထွက်ပါနှင့်။ ရောင့်ရဲပါ၊ တင်းတိမ်ပါ၊ ဆင်းရဲသည်ကို ဂုဏ်ယူပါ။ မတရား
၅ ။ သတ္တ၀ါတို့ကို မညှဉ်းဆဲပါနှင့်၊ မနှိပ်စက်ပါနှင့်၊ကာယ အားဖြင့်၊ နှုတ်အားဖြင့်၊စိတ်အားဖြင့်
၆ ။ သတ္တ၀ါအားလုံး မိမိနှင့် ထိတွေ့သိရှိသူ၊ မိမိနှင့် ထိတွေ့သိရှိခြင်း မရှိသူ၊ မိမိအား ချစ်ခင်လိုလား
သူ၊ မိမိအား မုန်းတီးစက်ဆုပ်သူ၊ မိမိအားချစ်လည်းမချစ်၊ မုန်းလည်းမမုန်း အလယ်အလတ်
သဘောရှိသူ အားလုံးအပေါ် သန့်ရှင်းကြည်လင်သော မိမိနှင့်ထပ်တူဖြစ်သော မေတ္တာထားရှိပါ။
၇ ။ လိမ်ညာ မုသားစကားပြောခြင်းမှ ရှောင်ကြည်ပါ။
၈ ။ မည့်သည့်စိတ်ဖြင့် ဖြစ်စေ၊ ကောင်းစေလို၍ပဲ ဖြစ်ဖြစ်၊ ဆိုးစေလို့၍ပဲဖြစ်ဖြစ်၊ ဖရုသ၀ါစာတည်း
ဟူသော ဆဲဆိုခြင်းမှ ရှောင်ကြဉ်ပါ။
၉ ။ ချစ်သူနှစ်ယောက်ကွဲသွားအောင် ကုန်းတိုက်သော၊ ရန်တိုက်ပေးသော ပိသုဏ၀ါစာ စကားကို
၁၀။ ကလေးသူငယ်များနှင့် လူဖျင်းလူပေါ့တို့ နားထောင်၍ ကောင်းရုံသာ ဖြစ်သော
( အနက်အဓိပ္ပာယ်မရှိ ၊ အကျိုးမရှိသော) အပျက်အချော် ပျော်ရုံသာဖြစ်သော သမ္ဇပ္ပလာပ
စကားကို ရှောင်ကြဉ်ပါ။ ဟိုစပ်စပ် ဒီစပ်စပ် ပါဝင်ကာ အာလာပ သလ္လာပ ဗရုတ်သုတ်ခ
မဟုတ်က ဟုတ်ကစကားများ မပြောပါနှင့်။
၁၁။ ဆိုရေးရှိက ဆိုသည့်စကားကို နားခံသာအောင်၊ သဘောပေါက်လွယ်အောင် သာယာပျောင်း
ညင်းစွာ ပြောဆိုပါ၊ လူပုံအလယ်တွင် အရှက်ကွဲစေခြင်း၊ ဒေါသတကြီး ပြုမူ ပြောဆိုခြင်းတို့မှ
၁၂ ။ ငါးပါးသီလကို မြဲမြံစွာ ကျင့်ကြံအားထုတ်ပါ။
၁၃ ။ သရဏဂုံသုံးပါးကို တည်ပြီးလျှင် ဗုဒ္ဓါနုဿတိ ဘာဝနာ၊ မေတ္တာဘာဝနာကိုပွားပါ။
၀ိပဿနာလမ်းသို့ တက်လှမ်း နိူင်ပါစေ။
၁၄ ။ သူတော်ကောင်းတို့ကို ဆည်းကပ်ပါ။
၁၅ ။ သူတော်ကောင်း တရားတို့ကို ကြားနာမှုများပါ။
၁၆ ။ အစဉ် ကြည်လင်သော ကောင်းသော စိတ်ကိုမြှုပ်နှံထားပါ။
၁၇ ။ လောကုတ္တရာတရားတော်တွင် စိတ်ကို မြှုပ်နှံထားပါ။
၁၈ ။ * ခန္တီစ သည်းခံခြင်းတရားကို မမေ့မလျော့လေနှင့်။
* ရန်ကိုရန်ချင်း မတုံနှင်းနှင့် ။
* မေတ္တာဖြင့်သာ ရန်ကို အောင်နိူင်ရာ၏ ။
၁၉ ။ ကာယ၊ ၀စီ၊ မနောအားဖြင့် ပြုမှုလှုပ်ရှား ပြောဆိုမှု၊ ကြံစည်တွေးတောမှု မှန်သမျှသည်
သင့်မသင့် လျော်မလျော်၊ အချိန်အခါ ဟုတ် မဟုတ်၊ ပြောလျှင်ဘာဖြစ်မလဲ၊ မပြောလျှင်
ဘာဖြစ်မလဲ၊ ဆင်ခြင်ပြီးမှ ပြောသင့်၏၊ လုပ်သင့်၏ ၊ စဉ်းစားသင့်၏။ အကျိုးအပြစ် ဝေဖန်
ပြီးမှ လုပ်သင့်၏ ။ စိတ်နောက်ကိုပါ၊ အချွန်းမရှိ၊ ပညာမရှိ မပြုမူသင့်။
၂၀ ။ ဇကောဓမ္မော ဟူသည့်အတိုင်း မိမိစိတ်ကို စောင့်ထိန်းမှသာ တရားလည်းရ၊ လူကောင်း
သူကောင်းလည်းဖြစ်၊ ယခုဘ၀တွင်ရော၊ သံသရာတွင်ပါ ချမ်းသာသုခ ရနိူင်သည်။
နိဗ္ဗာန် ရောက်ကြောင်း၊ မဂ်တရား၊ ဖိုလ်တရားကို ကျင့်ကြံ အားထုတ်နိူင်ပါစေ။
၂၁ ။ စိတ်ကို မေတ္တာဖြင့် ထုံမွမ်းပါလေ။
၂၂ ။ မိမိစိတ်ကို အစဉ် သတိဖြင့် ကပ်ထားပါလေ မလွတ်လိုက်ပါနှင့်။ စိတ်ဟူသည် ဖြန့်ကျက်တက်
ရေးသားသူ အောင်ဦး ရေးသားချိန် 14.3.08 1 ရေးသားခဲ့ရန်
၁ ။ သုစိန္တ တစိန္တိ
ကောင်းသောအကြံအစည်ကို ကြံစည်ခြင်း ။
၂ ။ သုဘာသိတဘာသီ
ကောင်းသောစကားကိုသာ ပြောခြင်း ။
၃ ။ သုကတ ကမ္မကာရီ
အပြစ်မရှိ ကောင်းသောအလုပ်ကိုသာ ပြုလုပ်လေ့ရှိခြင်း ။
ရေးသားသူ အောင်ဦး ရေးသားချိန် 13.3.080ရေးသားခဲ့ရန်
ဖြစ်တိုင်း ပျက်တိုင်း မသိက မောဟ ဟုဆုံးမခဲ့၏ ။
အခါခပ်သိမ်း ကိလေသာမီး တောက်လောင်နေသူများ
ဖြစ်လျက် အဘယ်ကြောင့် ပျော်မြူးရယ်ရွှင်ခြင်း ဖြစ်ဘိ
သနည်း ။ အဘယ့်ကြောင့် နှစ်လိုဝမ်းသာခြင်း ဖြစ်ဘိ
အ၀ိဇ္ဇာအမိုက်မှောင်ကြီးဖြင့် ပိတ်ဆီးနေသူများ ဖြစ်ပါလျက်
အဘယ်ကြောင့် ပညာတည်းဟူသော ဆီမီးကို မရှာဘဲ
ရေးသားသူ အောင်ဦး ရေးသားချိန် 12.3.080ရေးသားခဲ့ရန်
၁ ။ စကားများများ ပြောသဖြင့် မမှန်မကန်သော မုသာဝါဒ စကားများပြောမိခြင်း ။
၂ ။ ပိသုဏ၀ါစာ ကုန်းတိုက် ၊ ချောပစ်စကား ပြောဆိုမိခြင်း ။
၃ ။ အကျိုးမဲ့သော သမ္ဗပ္ပလာပ စကားပြောဆိုမိခြင်း ။
၄ ။ ကြမ်းတမ်းယုတ်မာသော ဖရုသ၀ါစာ စကားကိုပြောမိခြင်း ။
၅ ။ သေဆုံးပါက အပါယ်သို့ လားရခြင်း ။
၁ ။ စက္ခုဒွါရ - မျက်စိအကြည် ၊
၂ ။ သောတဒွါရ - နားအကြည် ၊
၃ ။ ဃာနဒွါရ - နှားခေါင်းအကြည် ၊
၄ ။ ဇိဝှါဒွါရ - လျှာအကြည် ၊
၅ ။ ကာယဒွါရ - ကိုယ်အကြည် ၊
၆ ။ မနောဒွါရ - စိတ်အကြည် ၊
ရေးသားသူ အောင်ဦး ရေးသားချိန် 10.3.080ရေးသားခဲ့ရန်
၁ ။ ဒါန = ပေးကမ်းစွန့်ကြဲ လှူဒါန်းခြင်း ။
၂ ။ သီလ = သီလဆောက်တည်ခြင်း ။
၃ ။ ဘာဝနာ = သမထ ၀ိပဿနာပွား များခြင်း ။
၄ ။ အပစာယန = အနန္တငါးဖြာအား ရိုသေခြင်း ။
၅ ။ ဝေယျာဝစ္စ = အနန္တငါးဖြာ၏ အမှု ကြီးငယ်တို့ကို ဆောင်ရွက်ခြင်း ။
၆ ။ ပတ္တိဒါန = မိမိပြုသော ကုသိုလ်ကောင်းမှုကို တစ်ပါးသူအား အမျှဝေခြင်း ။
၇ ။ ပတ္တာနုမောဒနာ = သူတစ်ပါးပြုသော ကုသိုလ်ကောင်းမှုကို ၀မ်းမြောက်စွာ သာဓု
၈ ။ ဓမ္မဿဝန = တရားတော်ကို နာကြားခြင်း ။
၉ ။ ဓမ္မဒေသနာ = တရားတော်ကို ဟောကြားခြင်း ။
၁၀။ ဒိဋ္ဌိဇုကမ္မ = နိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်း ဖြောင့်မှန်သော အယူကိုယူခြင်း ။
အဆင်းသာရှိ၍ ရနံ့မရှိသော၊ တင့်တယ်လှပသော( ပေါက်ပွင့်စသော ) ပန်းသည် ပန်ဆင်သူအား ရနံ့တည်းဟူသော အကျိုးကိုမဆောင်နိုင်သကဲ့သို့ ကောင်းစွာဟောကြားတော်မူအပ်သော ( ပိဋကတ် ) တရားတော်သည် မလိုက်နာ မကျင့် ကြံသူအား အကျိုးကိုမဆောင်နိုင်ကုန်။
ဆတ္တပါဏိဥပါသကာဝတ္ထု၊ ပုဖ္ပ၀ဂ်၊ ဓမ္မပဒပါဠိတော်
ရေးသားသူ အောင်ဦး ရေးသားချိန် 9.3.080ရေးသားခဲ့ရန်
ပြည့်စုံသော သီလရှိကုန်သော မမေ့မလျော့ နေလေ့ရှိကုန်သော ကောင်းစွာ ( ဥာဏ်ဖြင့် ) သိ၍ ကိလေသာမှ လွတ်မြောက် သော ထိုသူတို့၏ သွားရာလမ်းကြောင်းကို မာန်နတ်သည် မသိမတွေ့ မမြင်နိုင်ပေ ။
(ဂေါဓိကတ္တေရ၀တ္ထု ၊ ပုပ္ဖ၀ဂ် ၊ ဓမ္မပဒပါဠိတော်)
အပြစ်ဖော်ပြ နှိမ့်ချဆုံးမလေ့ရှိသော ပညာရှိအား မြှုပ်ထားသောရွှေအိုးကို ပြောကြားလာသူကဲ့သို့ ထင်မှတ်ရှုကြည့်၍ ဆည်းကပ်ရ၏။ ထိုသို့ သဘောရှိသောပညာရှိကို ဆည်းကပ်သောသူအားမြတ်၏။ မယုံ့ညံ့ပေ။
(ဓမ္မပဒ - ရာတ္ထေရ၀တ္ထု)
ရုပ်နာမ်နှစ်ပါး၊ ရှုပွားဘို့ရာ၊ ဘာများဝန်လေး၊ သင်ငေးနေတာ၊ နေ့ရက်လဖြုန်း၊ သေဆုံးတော့ မှာ၊ သင့်ဘ၀ သင်မှအားမနာ။
ရေးသားသူ အောင်ဦး ရေးသားချိန် 8.3.080ရေးသားခဲ့ရန်
ကုသိုလ်မယူ၊ အသက်ရှူ ၊ ထိုသူသေ၍ နေတော့သည်။
အကုသိုလ်ယူ၊ အသက်ရှူ၊ သူလည်းသေ၍ နေတော့သည်။
ကုသိုလ်ပဲယူ၊ အသက်ရှူ ၊ ထိုသူမသေ ရှင်တော့သည်။
ဖြစ်အောင်ပြုက လောဘတဏှာ၊ ပျက်အောင်ပြုက ဒေါသအာဂ၊ မသိငြား ဖြစ်ပွားအ၀ိဇ္ဇာ။
မလုပ်မပြော၊ လုပ်မှပြော၊ သဘောစင်လှစေ။
အပြောသာချဲ့၊ အလုပ်မဲ့၊ ကဲ့ရဲ့မလွတ်ချေ။
မကောင်းမှုအကုသိုလ်ကံကို ပြုကြကုန်သည့် ပညာမဲ့ကုန်သော သူမိုက်တို့သည် မိမိသည်ပင် ရန်သူကဲ့သို့ဖြစ်၍ သံသရာ၌ ကျင်လည်ကြရကုန်၏။
ဗုဒ္ဓမြတ်စွာ လောင်းလျာတုန်းက၊ နောက်ဆုံးအထိ ပါရမီ လူနတ်များစွာ ချမ်းသာရေးမို့၊ အသက်ပေးလို့ ဖြည့်ခဲ့သည်။ ဗုဒ္ဓမြတ်စွာ သာသနာအတွက်တော့၊ ငါပါအသက် ဆုံးစေမည်။ စိတ်မပျက်ပေါင် ခုလိုတွေးလို့၊ ကုသိုလ်ရေးမို့ ကြိုးစားမည်။
ကျေးဇူးတော်ရှင် မဟာဂန္ဓာရုံ ဆရာတော်ဘုရားကြီး
ရေးသားသူ အောင်ဦး ရေးသားချိန် 7.3.080ရေးသားခဲ့ရန်
တစ်နေ့တစ်လံ ပုဂံဘယ်မရွေ့ပေမယ့်... ပုဂံကိုကျောခိုင်းပြီး ပြေးရင်တော့ဘယ်တော့မှ မရောက်ဘူး မှတ်ပါ။
စစ်ကိုင်းတံတား အလျှောက်မခက် အဆောက်ခက်။ လယ်လုပ်မခက် လယ်တည်ခက်။ အကျင့်မခက် မသိခက်။
သဒ္ဓါက အထုပ် ။
၀ီရိယက အလုပ် ။
သတိက အချုပ် ။
သမာဓိက အအုပ် ၊၊
ကျေးဇူးတော်ရှင်တိပိဋကဓရ- ဓမ္မဘဏ္ဍာဂါရိက ယောဆရာတော်ဘုရားကြီး
လူလည်း မဆင်းရဲ၊ စိတ်လည်း မဆင်းရဲ၊ ဥာဏ်တော့ ဆင်းရဲတယ်။ ၀ိပဿနာရှု မှတ်နေစဉ်- ၀ိပဿနာ ရှုလို့ကောင်းလိုက်တာဆိုရင် တဏှာ၊ ငါရှုနိုင်တယ်၊ ငါမြင်နိုင်တယ်ဆိုရင် မာန၊ ငါရှုနေတယ်ဆိုရင် ဒိဋ္ဌိ ဖြစ်နေပြီဆိုတာ အထူးသတိပြုပါ။
ရေးသားသူ အောင်ဦး ရေးသားချိန် 7.3.08 1 ရေးသားခဲ့ရန်
သူတော်မဟုတ် သူယုတ်တို့အား အကြိမ်တစ်ရာ ပေါင်းသော်လည်း ဘာမှ ကျေးဇူးမများနိုင်ပေ။
ရေးသားသူ အောင်ဦး ရေးသားချိန် 5.3.080ရေးသားခဲ့ရန်
ခန္ဓာ၏ အဖြစ်-အပျက် ကို မမြင်ဘဲ အနှစ်တစ်ရာ ရှည်နေရတာထက် အဖြစ်-အပျက် ကို မြင်ပြီး တစ်ရက်မျှ အသက်ရှည်တာက မြတ်၏။။ ဖြစ်-ပျက်မပါ သက်တစ်ရာ နေတာအလကား။
ဖြစ်-ပျက်ကိုမြင် တစ်နေ့ ပင် လွန်လျှင် ထို့ထက်အကျိုးများ။
ဆိုပိန့်မညှာ၊ စေ့စေ့နာလော့၊ ဂင်္ဂါသဲမျှ၊ ပွင့်ကုန်ကြသား၊ ဘုရားသာသနာ၊ ခေတ်အခါဝယ်၊ လူ့ရွာနတ်၌၊ နင်ကြုံကြိုက်လည်း၊ အမိုက်မချွေ ၊ အလိုက်နေ၍၊ အခြေမကြီး၊ အချီးနှီးလျှင်၊ ယီးတီးယောင်တောင်၊ ခုတိုင်အောင်တည့်။
သိချင်ယောင်ဆောင်သော မသိမိုက်သည် မသိချင်ယောင်ဆောင်သော သိမိုက်ထက် ပို၍ ကန်း၏။
တတ်ချင်ယောင်ဆောင်သော မတတ်မိုက်သည် မတတ်ချင်ယောင်ဆောင်သော တတ်မိုက်ထက် ပို၍ ကန်း၏။
ရေးသားသူ အောင်ဦး ရေးသားချိန် 4.3.080ရေးသားခဲ့ရန်
ဓမ္မော ဟဝေ ရက္ခတ ဓမ္မစာရီ
- တရားကို စောင့်ရှောက်သူကို တရားက ပြန်၍ စောင့်ရှောက်၏။
လူတိုင်း၌ မွေးကတည်းက ပါလာသော “ဓားမကြီး”တစ်လက် ရှိ၏။
၎င်းကို အသုံးပြုတတ်က အသုံးဝင်ပေမယ့် အသုံးမပြုတတ်က မိမိကိုယ်ကိုယ်မိမိ ပြန်၍ ခုတ်သတ်တတ်၏။ ထို “ဓားမ”သည်ကား လက်နှစ်လုံးခန်ရှိသော ပါးစပ်ပေါက်ဖြစ်၏။
ဖားအောက်တောရဆရာတော်ဘုရားကြီး ဟောကြားတော်မူသော ] စိတ်ဓာတ်ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးတရားတော် မှကောက်နှုတ်၏။
အခြားသူများ၏ အပြစ်များကို မကြည့်ရာ၊ အခြားသူများ၏ ထိုထိုကောင်းမှု မကောင်းမှု ပြု မပြုကိုလည်း
မကြည့်ရာ။ - မိမိ၏ ကောင်းမှု ပြုသည် မပြုသည်ကိုသာ ကြည့်ရာ၏။
ကိုးကွယ်ရာမှားခြင်းသည် အမှားတကာတို့တွင် အမှားဆုံးသောမှားခြင်း ဖြစ်၏။
ဆရာကြီးဦရွှေအောင် မဟာဝိဇ္ဇာ(သက္ကတ) ၊ သဒ္ဓမ္မဇောတိကဓဇ (သာသနာပြုဘွဲ့)
လိုချင်လျှင် ဆင်းရဲသည်။ မလိုချင်လျှင် ချမ်းသာသည်။
တစ်စတစ်စ၊ စွန့်ဝံ့မှလျှင်... ဘ၀နောက်နှောင်း၊ ဆက်တိုင်းကောင်း၏။
“ဂါမဏိ- လွန်လေပြီးသောအခါက သတ္တ၀ါတို့သည် မကင်းသော ရာဂ၊ ဒေါသ၊ မောဟ ရှိကုန်၏။ ယင်းတို့ဖြင့်နှောင်ဖွဲ့ကုန်၏။ ကချေသည် သည်ထိုသတ္တ၀ါတို့အလယ်သို့ ၀င်၍ ထိုသတ္တ၀ါတို့အား လွန်စွာနှစ်သက်ခြင်း၊ အမျက်ထွက်ခြင်း၊ မိုက်မဲတွေဝေခြင်းငှာ တပ်နှစ်သက်စေတတ်သောအာရုံ၊ မိုက်မဲတွေဝေစေတတ်သော အာရုံတို့ကို အနီးသို့ ဆောင်၏။ ထိုကချေသည်
မိမိလည်းလွန်စွာမေ့လျော့လျက်သူတစ်ပါးတို့ကိုလည်း လွန်စွာမေ့လျော့စေတတ်သောကြောင့် သေသည်မှနောက်၌ ပဟာသ အမည် ရှိသောငရဲ ၌ဖြစ်ရ၏” ဟု ဟောတော်မူ၏။
ရေးသားသူ အောင်ဦး ရေးသားချိန် 2.3.080ရေးသားခဲ့ရန်
(၁) အရက်သေစာသောက်စားရာ၌ အဖော်ပြုသူ။
(၄) လောင်းကစားရာ၌ အဖော်ပြုသူ။
ဤအင်္ဂါ (၄) ပါးနှင့် ပြည့်စုံသူကို အပါယသဟာယ မိတ်ဆွေတု၊ အပါယ်ဖော် မိတ်ဆွေတု ဟု ခေါ်သည်။
လောကဒဏ်ရာ၊ ကိုယ့်သာနာ၊ စိတ်မှာ မနာနှင့်။
ရေးသားသူ အောင်ဦး ရေးသားချိန် 1.3.08 1 ရေးသားခဲ့ရန်